> Resource > Top List > Top 5 Free Android Araajida
Telefoonada Smart uu noqon karaa mid xiiso leh codsiyada qaar. Dabcan, codsiyada lacag la'aan ah waxaa loo tixgeliyaa sida hadiyada ugu wanaagsan ee taageerayaasha Abdroid, laakiin dhammaantiin ma aha codsiyada Android oo lacag la'aan ah ay ka qiimo tayada. Waa hagaag, halkan ayaa ugu sareysa 5 codsiyada Android oo lacag la'aan ah in qiimihiisu aad maxkamadda. Ku raaxayso codsiyada tayo sare leh oo ay waxba bixinta oo dhan.
4. Mobo Converter
1. Samsung Kies - codsiyada lacag la'aan ah Android
Samsung Kies waa mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan lacag la'aan ah ee telefoonada Android iyo murriyado, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad ka Samsung telefoonka mobile wareejiyo photos, music iyo xiriirada ka Samsung telefoonka ama kiniin in computer, iyo qeybsanaan. Xogta la wirelessly synced karaa inta u dhaxaysa laba telefoonada Samsung iyo kiniiniyada.
Maamul music ku saabsan habka oo wuxuu ku raaxaysan music iyadoo aan loo eegayn meesha aad joogto.
Bedelka sawiro iyo videos in phone Samsung oo kiniin ah.
Meel Free in qalab mobile Samsung by wareejinta xogta galay aaladaha kale.
Taariikheed ee kaabta, abuse wac, qoraalo, xiriirada iyo ka badan oo ku saabsan qalabka Samsung
Qasaarooyinka: Waa la heli karo qalabka kale ee Android aan.
2. MoboRobo - codsiga Android oo lacag la'aan ah
MoboRobo sidoo kale waa codsi ah oo lacag la'aan ah Android oo taageera labada telefoonada Android iyo sidoo kale qalabka macruufka. Iyada oo taageero ka codsigan, in aad qalab macruufka wareejin karaan macluumaadka, sida xiriirada, muusig iyo sawiro leh, ka qalab Android aad. Mobo Robo ayaa xarun ka dhisay-in download khayraadka ka meesha aad kala soo bixi kartaa wallpapers, barnaamijyadooda, ciyaaraha iyo ringtones.
SMS Quick diraya / helaya iyada oo Desktop PC
Waxaa la dhisay-in xarunta khayraadka download
Xogta Transfer u dhexeeya qalabka macruufka iyo qalab Android
Multi-warbaahinta maamulka file
Tababaraha App si buuxda u shaqaysa
Maamul qalab aad by raaxada of your computer
3. MyPhoneExplorer - codsiyada Android for free
MyPhoneExplorer , taas codsiga Android oo lacag la'aan ah, oggolaanaysa in aad maamulato qalab mobile Android si fudud. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa xiro qalabka aad la computer iyadoo la kaashanayo Bluetooth ama via cable ka dibna waxa aad bilaabi kartaa waxaa maaraynta. Qaar ka mid ah software antivirus waxaa laga yaabaa in aad joojiso ka soo degsado codsigan laakiin tani waa si fiican u sir la'aada.
Codsiga la qaadan karo oo kor u shaqeynta ah ee telefoonka aad Android.
Abaabulaan Calendar, digniinta.
Diraan / helaan Messages.
Hubi / Maamul xaaladda Memory qalab Android.
Nidaameed PC qalabka Android.
4. Mobogenie - codsiyada lacag la'aan ah ee telefoonada Android
Mobogenie - desktop arji Android ku siinayaa xarunta si ay u gudbiyaan xogta aad ka your computer si aad telefoon iyo sida kale. Waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijyadooda la kaliya hal click oo u raaxayn wax lacag la'aan ah. Waxa kale oo aad ku maarayn xiriir telefoonka aad ka keyboard PC iyo iyaga xaalkaa sida ay doorashadaada. Tani waa software ah sixir ah oo xallin doonaan dhibaatooyin farabadan oo aad ka dhigi doonaa riyooyinkiinna aad rumowday.
Tababare Great SMS
Transfer xogta u dhexeeya qalabka
Maamul files Media
Kaabta xogta iyo soo celin marka loo baahdo
Tababaraha Desktop aad mailkooda
Fududee isticmaalka telefoonka aad
Wixii taageerayaasha Android, taas Wondershare MobileGo for Android yahay duco. Waxaad ku dari kartaa music iyo warbaahinta kale faylasha meel kasta iyo waqti kasta. Waxaad qaadan kartaa raad raac ah oo xogta aad iyo ku celin in kiiska ayaa qorsheyneysa in aad beddesho telefoonka ama laga badiyay hal hadda. Waxaad abaabulo laga yaabaa in barnaamijyadooda aad qalabka Android aad ka your computer.
FeaturesPros Muhiimka ah:
Abaabulaan barnaamijyadooda aad.
Diritaanka qoraalka Group.
Maamul taleefan oo ka kombiyuutarka.
Hel khayraadka Online hal meel (Keliya version Windows leedahay).
Bedelka xiriirada si fudud oo iyaga ka bedel.
Maamul telefoonada Android oo kiniiniyo ah ama cable USB aan.
Best lagu bedelan karo Manager 5 HTC nidaameed